Tag: mmekọrịta retail | Martech Zone
Tag: mmekọrịta nkwari akụ
Ebumnuche nke oge a gbasara azụmahịa na e-azụtawo na atụmanya ndị ahịa gbanwere. Ozugbo a bara uru-tinye, online àjà ugbu a ghọọ a isi ahịa touchpoint maka ọtụtụ retail ụdị. Ma dị ka isi mmiri nke mmekọrịta ndị ahịa, mkpa ọ dị nkwado ahịa ahịa dị elu na-adị elu. Ọrụ ndị ahịa E-azụmahịa na-abịa na nsogbu na nrụgide ọhụrụ. Nke mbụ, ndị ahịa ụlọ na-etinyekwu oge n'ịntanetị tupu ha emee mkpebi ịzụta ha. 81% nke ndị zaghachiri nyochara ha